Semalt Watch: Nzira Yokudzivirira Nayo Malware Uye Mimwe Zvimwe Zvirwere
Vashandi vepaIndaneti vakabiwa zvakanyanya kudarika $ 12 mabhiriyoni, uye ivo vakagadzirirwa sekugara vachiba. Vanoona vanhu vakwegura sevanonyanya kutaridzirwa. Kune dzimwe nzira dzavanoshandisa.
Michael Brown, nyanzvi inotungamirira kubva kune Semalt , anotsanangura nzira yekudzivirira njodzi dzinokonzera malware.
1. Zvinhu zvepachena
Paunenge uchitsvaga, iwe unogona kuwana zvipikicha zvinokuudza kuti uchawana zvinhu pasina. Inogona kuva burger yakasununguka, uye iwe une nzara huru. Usawa nekuda kwayo. Kana iwe ukatora pane chikwata kana kubatanidza, iyo ichazarura peji inotora malware mumakombiyuta yako kana mumigodhi pachepa yako pachako.
Mune zvimwe zviitiko, peji ichakupa iwe nefomu kuti uzadze. Mashoko aya achashandiswa nevatengesi.
Usanamatira pazvivhura izvi. Chengetedza kuti zvipo izvi ndezvechokwadi nekutsvaga paGoogle, kuenda kune webhusaiti yepamutemo kana chechokwadi kutarisa nzvimbo dzakadai seNyoka.
2. Kufuridzira vanochema
Vamwe vanotsvaka vanhu vari kuchema, kunyanya chirikadzi. Vanoverenga mapeji okutadza uye vanowana hukama hwepedyo hwepedyo hwevakafa.Secammer anofungidzira kushanda mubhangi ndokudana shamwari yepedyo. Iko kunogamuchira ruzivo rwevanhu pachavo kuburikidza neizvi kuvanza. Ne ruzivo urwu, iyo scammer inobata vafirwa.
Kana uri mumamiriro ezvinhu akadaro, dzivisa kudzivirira nyaya dzezvemari sezvaunenge uchinetseka uye zvinotyisa zviri kunze uko zvinokurudzira iwe. Dzokorora pamatare uye emaimeri zvakanyatsonaka kana wapedza kuchema.
3. IRS zvikanganiso
Vamwe vanonyadzisa vachati vaizvifananidzira kushanda kweRS.Iyo ndiyo imwe yepamusoro-soro.Iye akadanidzira achareva kuti iwe unokwereta IRS mari, kazhinji inodzorera mitero.
Vanokukumbira kuti ufunge mari yacho pakarepo pane imwe nyaya, kana iwe uchasungwa uye uchapomerwa mhosva. Kuti ubudise izvi, vashandi vanogona kushandisa mashoko akavanzika akafanana nehuwandu hwehutano hwehupfumi kuti akunyengedzere kuti uite kuti ivo vanoshanda chaizvo kune IRS.Nzira iyo inoshandiswa kushandisa ndeyekuti IRS ichadzosera iwe mari mushure mekunge iwe upe mumwe munhu ruzivo kumunhu anodana.
IRS inowanzotaurirana kuburikidza nepaipo service uye kana ukawana foni iwe unogona kusimbisa kana chiri chechokwadi nekudana 800-829-1040 iyo iyo nhamba yefoni IRS.
Nzvimbo yako yekuchengeteka kweNhamba Nhamba inoshandawo senhamba yako yeMedare uye inonyanya kutarisa mashoko aya uye munguva pfupi unogona kuwana mhosva dzausina kutora.
Chengetedza nhamba, chengetedza yakavanzika. Kana ukacherechedza chero basa risina kuzivikanwa, zivisa inshuwalhu yako yehutano pakarepo. Vanhu vanogona kutora Social Security Information yako kuburikidza nefoni dzehupfumi. Vanowanzotaurira kuti vanoshevedza kubva kuUnited Health Insurance Marketplace. Hurumende dzehurumende hadzizi kushevedza uye kukumbira ruzivo rwemunhu. Kana iwe ukawana mufonesi achikumbira ruzivo rako pachako, sunga.
Unogona kunge uchirumbidza pamubhedha wako uye unofarira kuratidzwa kwaunofarira apo foni inonamatira. Iwe unotora uye unoti "Hongu." Hapana anopindura. Iyi inonzi robot, inoda kuongorora zvinogona kuwanikwa. Iwe unogona kudzivisa izvi nekushandisa Dhiyabhorosi ID. Uyewo, usapindura mazita asingazivikanwi. Muchengeti chaiye anowanzosiya mharidzo pane kupindura kwako.
6. Ruzhinji rwemashoko akavanzika
Pasinei nekuedza kwako zvakanakisisa kuti uchengetedze ruzivo rwako rukuru kubva pamaoko evanovhunduka, vanogona kuwana zvinyorwa kubva kune:
Makambani asina kukanganisa anotengesa vatengi vavo mashoko
Vamwe vanyengeri vangave vakaedza uye vakabudirira kana vakakundikana kukutsvaga
Fake sweepstakes uye ongororo apo iwe unofanira kuzadza tsanangudzo yako.
Izvozvi zvose rudzi rwemhando yezvigadzirwa zvevhiringidzi. Ngwarira Source .